Ireto No Nokarohan’ny Mpiserasera Rosiana Tao amin’ny Google Tamin’ny 2015 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Desambra 2015 4:47 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, русский, 한국어, Español, Aymara, English
Anisan'ireo zava-nitranga malaza nokarohan'ny Rosiana tao amin'ny Google tamin'ity taona 2015 ity ny fianjeran'ny fiarahamanidina A321. Pikantsary tao amin'ny YouTube.
Nandritra ny herintaona, nidera ny Eurovision sy ny fanatanjahantena hockey ny mpiserasera aterineto Rosiana, saingy nisaona ireo Rosiana malaza namoy ny ainy ihany koa ary nanaraka ireo zava-nitranga mampalahelo tany Ejipta sy Frantsa, araka ny tahirin-kevitra tamin'ny fikarohana Google.
Araka ny tatitra fanao isan-taona tamin'ny Taona nitadiavana dia nanome topimaso ireo fikarohana malaza indrindra tao amin'ny RuNet ny Google.
Tamin'ny lahatsary fohy, nanolotra topi-maso ireo zavatra be mpikaroka indrindra tao amin'ny aterineto Rosiana tamin'ity taona 2015 ity ny Google Rosia
Nanolotra ireo tabilao sasany misy ireo zavatra malaza indrindra nahaliana ny Rosiana nandritra ny herintaona ny Google.
Ahitana ny Eurovision sy ny tompon-daka manerantany amin'ny hockey (izay nahazoan'ny Rosia volafotsy) ny zavatra malaza indrindra tamin'ity taona ity, ary koa ny tako-masoandro sy ny Oscars 2015. Indrisy fa mampalahelo avokoa ny maro amin'ireo zava-nitranga malaza indrindra: ny fianjeran'ny fiaramanidina A321 ary tao anatin'ny lisitra ihany koa ny fanafihan'ny mpampihorohoro tao Paris.
Liana tanteraka ihany koa ny mpiserasera Rosiana mba hahita famaritana na vaovao fanampiny momba ny zavatra tahaka ny ISIS (Fanjakana Islamika), ny Leviatana (horonantsary Rosiana malaza indrindra izay nandrombaka ny Golden Globe), ary ny diezy #PrayforParis, ankoatra ny hafa.
Ahitana ireo Rosiana fanta-daza maromaro nodimandry tamin'ny 2015 na talohan'izany kosa ny nanaovana fitadiavana be indrindra amin'ny olona ambony, anisan'izany ny kintan'ny pop Zhanna Friske, mpanao politika Boris Nemtsov, andrarezin'ny dihy Maya Plisetskaya, mpilalao sarimihetsika Lev Durov, ary mpamokatra horonan-tsarimihetsika Eldar Ryazanov. Saingy nahazo ny lazany ihany koa ny mpandray anjaran'ny Eurovision miaro ny voninahitr'i Rosia, Polina Gagarina, ary nahazo ny laharana faharoa teo amin'ireo olona be mpitady an'aterineto indrindra ao Rosia.
Ahitana ny sary namboarina hihomehezana an'i Carl avy ao amin'ny andian-tantara mitohy Walking Dead (izay ampitovian'ny Rosiana amin'ny gusto), ny sary namboamboarina “inona ny lokon'ny akanjo“, ary ny ny sary namboamboarina sarotra adika “Ничоси” teraka tao amin'ny tambajotra sosialy Rosiana VKontakte ny nanaovana fitadiavana be indrindra tamin'ireo “ny sary namboamboarina malaza tao amin'ny RuNet.